Taageerayaasha Ilhaan iyo Trump oo isku banaanbaxay - BBC News Somali
Taageerayaasha xildhibaanka Aqalka Congress-ka Maraykanka Ilhaan Cumar iyo kuwa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhigay banaanbaxyo iska soo horjeeda xilli Trump uu booqanayay magaalada Minnepolis ee ay Soomaalida ku badantahay iyo taageerayaasha Ilhan.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa ku sugnaa magaalada Minnesota, halkaas oo ka samaynayay hadal jeedin ku saabsan wareegtada dib u habeynta canshuuraha.
Boqolaal qof oo taageersan xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa Trump ku eedeeyay in uu maagis iyo daandaansi ku hayo Ilhaan Cumar.
Madaxweynaha ayaa dhowaahan aad u hadal hayay Ilhaan, isaga oo ku eedeeyay wax u muuqday in ay u qiil samaynayso weeraradii 9/11 ee lagu burburiyay daarihii dhaadheeraa ee New York.
Dhanka kale taageerayaasha Trump ayaa ku dhawaaqayay hal ku dhegyo ay ku taageerayaan madaxweynaha iyo ololihiisa dib usoo doorashada ee sannadka 2020-ka.
Madaxa hay'adda u doodda xuquuqda Islaamka ee Caira Jaylaani Maxamed ayaa yiri "Arrinka ugu weyn ee aan maanta meesha u nimid waa in aan taageerno walaasheen Ilhaan, tan labaadna waa in aan muujino in dhaqdhaqaaqa uu madaxweynaha sameeyay aysan ahayn wax reer Minnesota ay diyaar u yihiin".
Habboon Cumar oo sidoo kale ka mid ahayd dadkii banaanbaxa qeyb ka ahaa ayaa sheegtay in Ilhaan weerar lagu yahay.
Ilhaan oo loo hanjabay
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in maalin kasta ay hesho hanjabaad kaga timaada dad aysan garanaynin, taas oo ah halis nafteeda ku wajahan.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweyne Trump uu Ilhaan ku eedeeyay in u geftay Maraykankanka kadib hadal ay jeedisay oo si aan sax ahayn loo fasirtay.
Muxuu yahay hadalka lagu heysto Ilhaan ?
Ilhaan Cumar oo taageero ka heshay Ivanka Trump